About Us | SKM Steel Holdings Co., Ltd (Myanmar)
SKM Steel Holdings Co., Ltd (SKM) isajoint venture between two leading companies from Myanmar and Japan: Steel King Company Limited and Mitsui & Co. respectively. Our aim is to bring the best of Japanese rebar forming expertise, stock management, and quality control to Myanmar construction industry to assist various construction project managers and owners for the best quality of Rebar, Rebar fabrication, Sheet Pile Trading and Sheet Pile rental at reduced costs and installation time.
Our SKM Steel Holdings Factory is equipped withawarehouse for rebar storage and fabrication is situated in Thilawa to avoid double handling cost of rebar for our customers.
For our customers who would like to visit our office, our Downtown sales office is conveniently located in the heart of Pazundaung township.
SKM Steel Holdings Co., Ltd ကို မြန်မာပြည်မှ Steel King Co., Ltd နှင့် ဂျပန်မှ Mitsuit & Co. မှပူးတွဲပြီးတည်ထောင်ထားပါသည်။ SKM Steel Holdings ၏ရည်မှန်းချက်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှ Rebar သံချောင်းလုပ်ငန်းများ၏ ကွေးဖြတ်မှုနည်းစနစ်များ၊ အလေအလွင့်နည်းသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုများ၊နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းနည်းစနစ်များ၊ အရည်အသွေးမြင့် sheet pile များ ကိုမြန်မာ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များဆီသို့ယူဆောင်လာပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
SKM Steel Holdings ၏ ဝယ်ယူသူများ ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်သိုလှောင်ခများသက်သာစေရန်အတွက် သီလဝါစက်ရုံတွင် သံချောင်းများသိုလှောင်ရန်အတွက်ဂိုဒေါင်လည်းထားရှိပါသည်။
ရုံးသို့လာရောက်၍ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းလိုပါက ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် မြို့ထဲရုံးသီးသန့်ထားရှိပါသည်။
Mitsui is one of the biggest Japanese trading companies in the world with offices in 66 countries with total revenue of 63 billion USD and deep experience in the steel industry spanning decades.
Steel King is one of the biggest construction steel distributors specializing in Reinforced Bars import and stocking in Myanmar with over 30 years of experiences.
SKM Steel Holding ဟာ Steel King Company Limited ( Myanmar) နှင့် MITSUI & Co.(Japan) တို့ ပူးတွဲတည်ထောင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
SKM Steel Holding မှဝန်ဆောင်မှုများဟာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ရေး အတွင်းရှိ သံချောင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိကကျတဲ့ Rebar wastage များအနည်းဆုံး ဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းအပြင် အလုပ်သမားဌားရမ်းခြင်းစရိတ်များကိုပါ လျော့ကျစေပါတယ်။
ထို့အပြင် Rebar များထိန်းသိမ်းရန် သိုလှောင်ရန်နေရာ ( Storage ) လိုအပိမှုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးတွင် အသင့်သုံးစွဲနိုင်ရန် ( Cut and bend Products ) သံချည်သံကွေးထုတ်ကုန်များကို လုပ်ငန်းခွင်အရောင် အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးခြင်း များကိုပါ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
SKM Steel Holdings သည် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များ စိတ်တိုင်းကျ သံချည်သံကွေး ဝန်ဆောင်မှုအပြင် Sheet Pile Sale လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။